Arcadium 2 bu ohuru ohuru 'ha na-eri ogwu ma di nma na uzo ya | Gam akporosis
Arcadium 2 bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mma iji kụọ Play Store n'izu a na gam akporo. A dị ọcha Archero gbaa em 'elu nke anyị ga-enweta nkà ka anyị na-agafe ebili mmiri nke ndị iro ụgbọ mmiri na ize ndụ asteroids na-akpali gafee na ihuenyo.
Un Egwuregwu nwere ọmarịcha aka na ihe ngosi ahụ na nka pixel ahụ na a nnọọ họọrọ agba palette n'ịwa a nnọọ Arcade visual ahụmahụ nke ụdị na-amasị anyị na anyị mobiles. Anyị ga-eme ya na egwuregwu nke dị ịtụnanya ọ bụghị naanị maka ndị ọrụ ya, mana maka ihe niile ị nwere ike ịmeghe dịka ụgbọ mmiri, anụ ụlọ na ihe ndị ọzọ.
1 Jiri nlezianya họrọ nkà
2 Ọtụtụ ndị iro na ndị isi ikpeazụ na Arcadium 2
3 Na-ebuli atụmatụ agha gị nke ọma
Jiri nlezianya họrọ nkà
arcade 2 na-eduga anyị ijide ụgbọ mmiri anyị site na ihuenyo nke anyị na-enweghị ike ịpụ, ma nke ọtụtụ ụgbọ mmiri ndị iro na-abanye na ebili mmiri na-efegharị. Anyị na-ebugharị ụgbọ mmiri ahụ na mkpanaka njikwa ya, ọ bụkwa ya na-ahụ maka ịgbanye ụgbọ mmiri ndị ahụ na akpaghị aka.
Ọ bụla abụọ ma ọ bụ atọ na ọkwa anyị ga-ahọrọ ọhụrụ nkà na anyị ga-etinye ụgbọ mmiri anyị iji mee ka ọ dị ike karị; yiri Archero na clones ndị ahụ na-apụta, na nke anyị zitere gị ụbọchị gara aga ụdị Archero kachasị mma.
Na eziokwu bụ na ọ nwere ụda ya n'ihi na anyị na-atụgharị ụgbọ mmiri anyị ka ọ bụrụ nke dabara na uto anyị mgbe anyị na-egwu egwuregwu ụdị egwuregwu a. Nke ahụ customization ike anyị nwere ike ya mgbe e mesịrị na ụgbọ mmiri na anyi nwere ike inweta, anu ulo ma obu oganihu n’iru ikike ngwa agha.
Ọtụtụ ndị iro na ndị isi ikpeazụ na Arcadium 2
Echere m, ihe anyị nwere n'aka dị iche iche dị iche iche "talent" na anyị nwere ike itinye iji hazie ụdị ọgụ anyị. Ma ọ bụ na-achọ ọkụ dị elu karịa ma ọ bụ na-akpata nsonaazụ pụrụ iche na agbapụ anyị nke mere na mgbe ha gburu onye iro ha ghọrọ ọtụtụ gbaa. Nke a na - eme Arcadium 2 ka ọ bụrụ egwuregwu ị ga-echebara echiche.
Mgbe ahụ anyị nwekwara ọtụtụ ndị iro na bosses na ọgaranya ahụmahụ nke mere na ọbụlagodi na enweghị ike ịkwaga na ihuenyo ahụ, na enweghị oke ala ma ọ bụ gburugburu, anyị na-eleghara ya anya na ọgaranya ahụ na ụgbọ mmiri niile.
Ebumnobi anyị bụ setịpụ ogologo oge anyị nwere ike ruo mgbe ha ga-ewepụ anyị, mechaa egwuregwu ahụ ma ka anyị gaa n'ihu ịmeghe ikike dị ike, melite ụgbọ mmiri anyị, nweta ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere ego ọla edo zuru ezu ma ọ bụ ọbụna zụta anụ ụlọ. Oh na echefula na anyị nwere 3 ndụ ihe na na anyị nwere ike na-abawanye na nkà ma ọ bụ ọbụna na ọgụ mgbe ha na-ada site ebibi onye iro ụgbọ mmiri.
Na-ebuli atụmatụ agha gị nke ọma
La Nsogbu nsogbu Arcadium 2 gbagoro na ọkwa ole na ole ma ọ bụ ebili mmiri, ya mere o doro anya ihe nkà ị ga - etinye n'ime ụgbọ gị ga - abụ. Anyị na-ekwu nke a n'ihi na ọ ga-adị mfe ịnweta mkpụrụ ego ma si otu a nwee ọganiihu karịa na egwuregwu ị ga-enwe izu na izu na mkpanaka gị, n'ihi ihe rụzuru, tebụl na ọbụlagodi ntụgharị iji nyekwuo omimi egwuregwu ahụ n'onwe ya.
Arcadium 2 bụ arcade egbu egbu mara ama nwere otutu, na ọtụtụ, n'azụ ihe ọ nwere ike ịkụziri gị na egwuregwu mbụ. A pixel art rụrụ n'ụzọ magburu onwe ya, visual richness dị iche iche ụgbọ mmiri na isi nke ọtụtụ agba, na a ukwuu dịgasị iche iche nke mmetụta na ụdị nile nke ikike nke mere na n'oge ụfọdụ a dum show nke "ezimezi oku" na-eme na gị na ihuenyo. mobile.
Un arcade a na-akpọ Arcadium 2 nke ị nwere n'efu na Storelọ Ahịa Play na micropayments na dịka otu n'ime ndị mbata kachasị mma na izu ndị na-adịbeghị anya na gam akporo. Ugbu a egbula oge ịnwale ya.
Egwu mara mma n'ụdị ya niile na nke ahụ na-enye gị ohere ịmegharị ụdị ọgụ gị na onyinye ndị ahụ anyị na-ahọrọ. Ndi iro di iche-iche na ndi agha anakpo ochie nke na-agbakwunye.
Usoro edemede: 7,3
Na-eri ahụ site na nke mbụ
Ike ya imepụta usoro ọgụ anyị
Anya bara ọgaranya nke nwere pixel art na agba ahụ nke na-agafe na ihuenyo niile na ụgbọ mmiri, asteroids, bosses ...
Usoro dị iche iche nke ụgbọ mmiri ndị na-awakpo anyị ka anyị ghara ị atta ntị
Ọtụtụ ọdịnaya iji kpọghee, melite ...
A sụgharịghi ya na Spanish
Arcadium - Ohere Ohere
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Arcadium 2 bu ohuru ohuru 'ha na-eri ogwu ma mara nma n'udi ya nile
Nhọrọ ndị kachasị mma na netwọkụ mmekọrịta ClubHouse